नेपाली युवाको र अरबी युवतीको बि, योगान्त प्रेम कथा, जसले कयौं देशका करोडौं मानिसलाई रुवायो.. एकपल्ट छोटो समय दिएर हेर्नुहोला। – Ap Nepal
साउदीका हरेक पत्रपत्रिकामा नुरको आ`त्मह त्याको खबरले म आश्चर्य`मा परेँ म अफिस भित्रैको एउटा क्याबिनमा कम्युटरमा ब्यस्त रहन्थे ।
मैले प्रतक्ष्य देखेको भने थिइन ? कालो बुर्र्का साउ`दीमा महिलाले लगाउने कालो लुगा लगाएर यात्रा`रत हुन्छन् यिनीहरु । रुखले त बरु आफ्नो पात बोक्राले ढाक्दैन तर उनी`हरुको शरीरको कुनै ठाँउ पनि ढाक्न बाँकी राख्दैनन् । राजलाइ झुन्ड्याएर मा`रिएको महिना दिन नहुँदै नुरको आ त्मह`त्याले म मात्र होइन नुरका परिवार पनि अच`म्मित भए होलान्।
आज नुरको आ त्मह त्याको खबरले राजको अन्ध`कार पुर्ण दिन अनी उसलाइ गुमा`एको पल झलझल आँखामा आउन थाल्यो । साउदी अरबको एक प्रतिष्ठित कम्पनि`मा हामी दुबै जना सँगै काम गर्थ्यौ । हामी मतलब राज र म । हामी साउदीको मुटु राज`धानी यानीकी रियादमा थियौ । राज सप्लाइ डिपा`र्टमा कार्यरत थियो ।उनी सप्लाइको क्रममा साउदीका घर घरमा जानु पर्थ्यो । त्यसै क्रममा राजको भेट नुरसँग भएको थियो ।
राज सँधै उनको बारेमा बताउथे । नुरको प्रशंसा गरेर कहिले पनि नथाक्ने राजको ब्यवहार देखेर म आफै थकित हुन्थे त्यस्तै साथ`को खोजीमा ।राजको ब्याख्यान`मा म आफै अल`मल्ल हुन्थेँ ।आखीर नुरमा के छ यस्तो ! मलाइ राजले फोटो देखाए पनि म रुपमा कहिल्यै बिस्वास गर्दैन थेँ ।
उनले दिएको यती मायानै मेरो जिन्दगी`को पुर्ण खुसी बन्नेछ । हेरौ जे लेखेको छ यो भाग्यमा त्यही हुन्छ । मलाइ यही म`र्न लेखेको छ भने म पराइकै माटोमा मरौ`ला ।
हो मलाइ मेरो स्वच्छ पशुपतीमा ठाँउ नमिल्ला, बाग्मती`को पानीले चोखीन नपाइएला,चन्दनसँगै जल्न नपाइएला तर मायामा दिएको ज्या`न कहाँ खेर जान्छ र ? बिशाल, हुन त म अभागी ठहरीनेछु, बिदेशको माटोमा पुरीँदा तर पनि माया भनेको माया हो ।
नेपाल रहँदा`सम्म कोही कसैमा आँखा नपरे पनि यहाँ उनीमा आँखा पर्नु मेरो भाग्यको खेल हो बिशाल, जे होगा देखा जायगा । नुर र राजको प्रेम देखेर मलाइ पनि डाहा हुन्थ्यो । मलाई पनि प्रेममा डुब्न मन लाग्थ्यो । मरूभूमिमा राप भित्र पनि राजको चमकता र मुस्कानले म सँधै प्रफुल्ल हुन्थे । उनिहरुको प्रेम झाँगिदै थियो ।
कहिले भेटेर त कहिले फोनबाट नै लामो समय|सम्म उनिहरुको कुराकानी चल्थ्यो । म कहिले काँही जिस्काउथेँ “राज तेरो त काम तमाम
म आफ्नै दुनियामा ब्यस्त हुन्थे, उनीहरु आफै भित्र हराउथे । एक कान दुइ कान मैदान । उनी`हरुको प्रेम नुरको घरपरिवारले थाहा पाए ।
फाँ`सी हुने अन्तिम रात राजले एउटा पत्र लेखे`को थियो र मलाइ भनेको थियो । राज यो पत्र एक चोटी पढेर नुरलाइ दे है । मैले किन हेर्नु राज र भन्दा राज भन्दै थिए , सायद तैलेनै उल्था गर्नु पर्ला बिशाल । मेरो आँखाभरी आँसु टम्म थिए । म डाँको छाडेर रुन पनि सकिरहेको थिइन । तर राजको आँखामा भने डर,त्रा`स,पिर भनेको पटक्कै थिएन । माया प्रतक्ष झल्किन्थ्यो ।
धर्म फरक भएकै कारणले म जस्ता कती मेरा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी हरु यहाँ हेपीएको चेपीएको तितो यथार्थ छ ।मान्छे आखीर मान्छे हो नी नुर, जात,धर्म, स्तर त हामीले बना`एकै त हो । तिमी नै भनत जन्मनु भन्दा अगाडी तिमी कुन धर्मको थियौ ।
काटे रगत त रातै आउछ नी हैन र नुर ? कि हिन्दु को रगत रातो अनी मुश्लिम,क्श्चीयनको सेतो,हरियो हुन्छ की हिन्दुको हरियो सेतो रगत हुन्छ ? तिम्रो बाबा लाइ सोध है । हुन त तिम्रो बाबा लाइ प्रेमको महत्व के थाहा ? सँधै पैसाकै पछाडी कुद्छन् ।पैसा दिएर धर्म परिवर्तन गर भन्छन् । पैसाले माया पाइने भए संसारमा सबै पैसावालहरु पुर्ण हुन्थे ।
त्यसैले मलाइ यो पत्र टुङ्ग्याउन मन छैन|अनी चाहन्न पनि तर पनि लामो गन्थनमा फस्दा लेख्दा लेख्दै अन्त्यमा तिमीसँग बिदा माग्न पनि नपाइएला की झै लाग्छ । त्यसैले हाम्रो भेट अब सक्नु पर्छ मैले । यो बेग रोक्नु पर्छ मैले जुन बेगमा म भावना पोखी रहेछु।
हाइया`क्अल्ला या नुर,मास`लाम राज दाइ के छ हो ? आजको हट न्युज म झसङ्ग भए ।सँगै काम गर्ने भाइ रहेछ ।आजको न्युज बबाल छ कुन्जन ।के छ दाजु सुनौ न त हामी पनि ।नुरले आ त्मह त्या गरीछे यार । को नुर ? राजकी नुर ? अँ हो ।
त्यसले यतीका पछी किन आ त्मह त्या गरी त थाहा छैन यार । मैले केही थाहा पाउन सकेको छैन । कारण के हो कसो हो अब पत्रीका पढ्न जानेको भएपो । एक छिन है मेल आए`को रहेछ । अफिसी`यल होला । मेल नयाँ ठेगाना`बाट आएको थियो । मैले अल्मलीदै खोँले ।अरबीमा लेखीएको भएर मैले पढ्न जानीन र कुन्जनलाइ भने ।
यार भाइ कस|री पढ्ने यो मेल अरबीमा छ त उसले हाँस्दै भन्यो यार दाइ हजुर पनि, नेट बाटट्रान्सलेट गर्नु न । यो जमा`नामा पनि यति कुराको के चिन्ता मैले आज खासै सोच्न सकिरहेको थिइन अनी हो त नी है भन्दै ट्रान्सलेट गरेर पढ्न थाँले ।‘नमस्ते देवर बाबु सञ्चै हुनु हुन्छ मैले राजको बारेमा आज मात्र थाहा पाँए ।
मलाइ फोन,नेट सबै तिर बन्देज लगाइ`एको थियो । आज मात्रै सबै थोक बाट फुकुवा गरीएको हो । मलाई मेरो साथीले एउटा भिडियो हेर्छस् भनेर
दिएको थियो । त्यो भिडियोमा राज`लाइ झुन्ड्याएर मारी`एको रहेछ । जुन कुरा मैले सहन सकिन । भिडियो हेर्नु लगत्तै राजको पत्र पनि पाँए । उहाँ सँग मैले पनि पत्रमा भेँटे ।
बिशाल बाबु हजुरहरुले त मलाइ निष्ठुरी भन्ने सोच्नु भएको होला ।त्यसैले मैले हजुरलाइ मेरो बारेमा भन्ने यही एउटा मेलको साहारा लिँए । म निष्ठुरी होइन बिशाल बाबु ।
मैले पहिलो पटक कसैलाइ प्रेम गरेको थिँए त त्यो राज थियो । अनी गर्नेछु त त्यो पनि राजलाइ । सत्यता थाहा नपाउदा सम्म त राज सँग भेट्ने आसा जिँउ`दो थियो तर सबै थाहा पाए पछी मैले जिउनुको अर्थ देखीन ।
म मेरो जिन्दगी अब अरुको नाम कसरी गरौ बिशाल बाबु मेरा आमा बाबा चाहनु हुन्छ म अरु कसै सँगबिबाह गरौ ।तर राज`लाइ सुम्पियको यो तन मन कसरी म जिउदै म`रेर अरुलाइ सुम्पिदै राजको मायालाइ अपहेलना गरौ ।त्यसैले मैले आ`त्मह त्या गर्ने निर्णय गरेँ ।
मैले गल्ती त गरीन नी है बिशाल बाबु बिशाल बाबु मैले हजुर`लाइ नदेखे पनि हजु`रको बारेमा राजको ओठ बाट सबै सुनेको छु ।त्यसैले हजुरले निर्दोष ठान्नु भयो भने म राजलाइ उगएको ठाँउमा गएर मेरो मायाको सर्जिम बक्ने हजुर`लाइ देखाउन सक्नेछु ।मलाइ माफ गर्नुस् ल बिशाल बाबु ।
उही हजुर`को हुन नसेकी,हजुरले फोनमा जिस्काउने,हजुरकी भाउजु ‘नुर’ – खसोखास केही समय अघि प्रकाशित भएको यो कथा र तस्बिरलाई हामीले लिएका हौं ।
Prevसारी लगाएर नाच्दै भाइरल भयकी”सारिवाली” गोमा आइन मिडियामा,रमाइलो कुराकानी, यति राम्रो हाँसो (भिडियो सहित)
Nextबिश्वास नलाग्ने घटना: जब पानीपुरीमा पि’साब फेरेर मि’साएपछि…हेर्नुहोस (भिडियो सहित)